Sunday, 25 Aug, 2019 1:17 PM
गीता सत्याल, उपमेयर, ललितपुर महानगरपालिका
गीता सत्याल उपमेयर ललितपुर महानगरपालिकाकी, जन्मिएकी हुन् काभ्रेमा । महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलबाट स्नातकोत्तर गरेकी उनी संस्कृत विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधीको तयारीमा छिन् ।
– ०७२ को संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा व्यवस्था गरिएअनुरुप ७५३ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन् । जसमध्ये १८ वटा स्थानीय तहमा मात्र पुरुष उपमेयरको भूमिकामा छन् । संयोजक उपमेयर हुने, दुई जना सदस्य नगरसभाबाट चुनिने प्रावधान छ । हिजो अदालत पुगेर आत्तिएका जनता स्थानीय तहमा छिटो छरितो न्याय सम्पादन हुन्छ भनेर आइरहनुभएको छ ।
– गत वर्ष एक सय ९४ मुद्दा आयो । ३६ वटामा मेलमिलाप गरायौं । ५८ वटा निर्णय गरेर टुंग्यायौं ।
० कस्ता मुद्दा बढी फेस गर्नुपर्ने रहेछ ?
– सम्बन्ध विच्छेदकै बढी छन् । तर, गत वर्ष भदौ १ बाट नयाँ मुलुकी संहिता लागु भएसँगै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा त्यत्ति आएका छैनन् । विशेष गरी साक्षी, माना चामल, आफ्नो जग्गा नभए पनि झ्याल राखेको, जिरो लेभलमा झ्याल राखेर, विरुवा रोपेर छिमेकीलाई दुःख दिएको, जमिनमुनिको पानी बेच–बिखन गरेर छिमेकीको घरको मुहान सुकेकोजस्ता मुद्दा बढिरहेका छन् । बहुविवाह, लिभिङ टुगेदरका समस्या पनि बढेका छन् । अहिले पनि ४÷५ वटा त्यस्ता घटना दर्ता भइरहेकै छन् । लिभिङ टुगेदरका कारण धेरैको घरबार बिग्रिएको र आफूहरु असुरक्षित भएको उजुरी बढ्दो छ ।
० कसरी सल्टाउनु हुन्छ ?
– सकेसम्म मेलमिलाप गराउने । कुनै आधार, प्रमाण पनि नहुने । न त विवाह दर्ता, न श्रीमती हो भन्ने कुनै प्रमाण नै । केटाले ‘मेरी श्रीमती हो, मसँगै बसेको’ भनेर स्वीकार्छ । दुई जनालाई एकापसमा राखी खोतल्ने प्रयास ग¥यो । केही सीप नचल्दा जिल्ला अदालत पठाइदियो ।
० उपप्रमुख न्यायिक समितिको प्रमुख । तर, आकर्षक मुद्दामा मेयरकै हस्तक्षेप हुन्छ रे नि ?
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– ०७४ ले नै भत्काउने जिम्मेवारी मेयरलाई, नक्सासम्बन्धी विवादित काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र बाँकी विवादित कामचाहिँ उपमेयरको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिलाई भनेर लेखेको छ । सबै न्याय निरुपणको काम एउटै कित्ताबाट भइदिए सजिलो । तर, भत्काउने काम प्रमुखलाई, नक्साको काम कार्यकारीलाई । नक्सासँगै जोडिएर आउँछ, साँध सीमानाको विवाद । त्यो हामीकहाँ त आउँदैन । त्यसकारण यसलाई कसरी निरुपण गर्ने ? न्यायिक समितिलाई कसरी बलियो बनाउने ? यस्तो दोहोरो मापदण्डबारे केन्द्र सरकारले पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।
० झमेला जति उपप्रमुखलाई टाँसो लगाइएपछि थ्रेटका कुरा पनि आउलान् । कसरी लिनुहुन्छ ?
– न्याय निरुपण गर्दा सत्य, तथ्य र प्रमाण जुटाएर गरे धम्कीसम्कीले केही हुँदैन । बुझेपछि उहाँहरुले मनन गर्नुहुन्छ ।
० त्यस्तो थ्रेट भोग्नु परेको छ ?
– सबै जनप्रतिनिधिले केही न केही भन्नुहुन्छ । त्यसलाई सुझाव भनेर पनि बुझ्नुपर्छ । हामी जनताको घर–घरमा गएर, भोट मागेर चुनाव जितेका मान्छेलाई सबैले चिन्ने भए । यहाँ समस्या लिएर आउने मान्छेहरु हिजो हामीलाई भोट हालेकै वा हामीले भोट मागेकै हुने भए । उहाँहरुलाई लाग्दो रहेछ, मैले चिनेको कारण मेरो पक्षमा फैसला हुन्छ । हामीले प्रमाण जुटाएर, फिल्डमा गएर यथार्थ अध्ययन गर्छाैं । त्यसरी न्याय सम्पादन गर्दा इजलाशमै झम्टन आएका पनि छन् । हामीले मत दिएर जिताएको, हामीलाई यस्तो न्याय नदिने ? भन्छन् । पक्ष मतदाता, विपक्ष पनि मतदान । त्यसैले हाम्रानिम्ति सबै बराबर हुन् । बोल्ने त प्रमाण हो नि † व्यक्तिगत रुपमा यसलाई सपोर्ट गर्छु भन्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा नगर प्रहरी राखेर पनि न्याय निरुपण गरिएको छ ।
० केन्द्रको कार्यादेशले हातखुट्टा बाँधिदिएर दौडमा भाग लिन जा भने जस्तो स्थिति हो ?
– एकदमै त्यही हो । हातखुट्टा बाँधिदिएको छ । दौडिएर फस्र्ट होऊ भनिएको छ । हाम्रा हातखुट्टा खुल्ला छोडिदिए जति मिटरको रेश पनि दौडिन सकिन्छ ।
० जनप्रतिनिधि भएका महिलाहरूलाई आफ्नै पीडा राख्ने ठाउँ छैन भन्छन् । कत्तिको साँचो हो ?
– हामी न्यायिक समितिको संयोजक भइसकेर अरुलाई न्याय दिन्छौं । तर, आफ्नो पीडा कसलाई पोख्ने ?
० कतिपय नगरपालिकामा उपमेयरलाई मेयरले अधिकार नै नदिएको र अनेक कारण लफडाका कुरा सुन्न पाइन्छन् । तपाईंहरुको महानगर कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
– आजको दिनसम्म मिस अन्डरस्ट्याण्डिङ छैन । हामी जे काम गर्छौं, सरसल्लाहमै गर्छौं । बाहिर अरुमा के छ ? थाहा छैन ।
० महानगरलाई उत्कृष्ट बनाउने के योजना छन् ?
– अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खाका तयार पारेका छौं । तत्काल र पहिलो चरणमा खाल्डाखुल्डी हटाउने र धूलो, धुँवारहित महानगर बनाउन सक्यौं भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । त्यही कारण महानगरपालिकाले दुईवटा ब्रुमर उपलब्ध गराइसकेको छ । महानगरलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने योजनाअनुरुप स्मार्ट स्ट्रिटको प्रक्रिया टेण्डर भएर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो कार्यान्वयनमा आएसँगै ललितपुर महानगरपालिका नेपालको पहिलो स्मार्ट स्ट्रिट लाइट भएको छ । शुरुमा कोपुण्डोलदेखि लगनखेलसम्म हुनेछ । त्यहाँपछि अन्य सेक्सनमा अघि लैजान्छौं । ग्रीनरीमा लगभग ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । साइकल लेनका काम अघि बढ्दै छ । फ्लाई ओभरको परिकल्पना गरेका थियौं । चार ठाउँमा अध्ययन हुँदैछ ।
० डिएभी स्कुल, अल्का अस्पताल, लबिम मलजस्ता ठूला व्यापारिक घरानाबाट किन कर उठाउन सक्नुभएन ?
– करदाताको सहजतालाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ । तिर्छन् भन्दैमा सबैसँग कर लिने होइन । कर असुलीका आ–आफ्ना दायरा हुन्छन् । अनि, कसैलाई करमुक्त गर्नु पनि हुँदैन । तपाईंले भनेका फर्महरुले कर तिरेको विवरण सम्बन्धित निकायमा पाउनुहुन्छ । अहिलेको जमानामा कर नतिरी व्यवसाय गर्ने हिम्मत कोहीसँग पनि हुँदैन ।
० सात दाजुभाइको कान्छी बुहारी । सबै जेठानी जागिरमा, तपाईंमात्रै किन राजनीतिमा लाग्नुभयो ?
– श्रीमान्को साथ र सहयोगले अघि बढ्न सफल भएँ ।
० तपाईं उपमेयर, श्रीमान् शिक्षण पेशामा । घर हेर्न अप्ठेरो छैन ?
– म उपमेयर चुनिएसँगै उहाँले आफ्नो २५ वर्षे शिक्षण पेशा छाड्नुभयो ।
श्रीमान्, श्रीमती एउटै रथका दुई पांग्रा हुन् । एउटा पांग्रामात्र खित्रिक्क भयो भने रथ अघि बढ्न सक्दैन । दुइटै पांग्रा बराबरी गुड्यो भने मात्र गति लिने हो । उहाँको सपोर्ट नभएको भए म यो ठाउँमा आउन सम्भव थिएन । सानैमा विवाह भयो । एसएलसी मात्र दिएकी थिएँ । बीचमा नर्सिङ पढेँ । अहिले संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्दैछु । यी सबैमा उहाँकै अतुलनीय देन छ ।